ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ, အမဲလိုက်နှင့်ငါးဖမ်း | USAHello | USAHello
သငျသညျမုဆိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ Are သို့မဟုတ်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့်ငါးဖမ်း? သင် USA တွင်အမဲလိုက်နှင့်ငါးဖမ်းအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ပါသောအရာကိုလေ့လာပါ. စည်းမျဉ်းများနှင့် ပတ်သက်. အထဲက Find, protected မျိုးစိတ်, နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံတည်းခို.
Kbh3rd နေဖြင့်မစ်ဆူရီအတွက်ငါးမျှား, CC ကို.
သတင်းများအရအကြောင်းကိုရှိပါတယ် 14 သန်းမုဆိုးနှင့် ပတ်သက်. 33 သန်း angler (ကလူသူအငါး) USA တွင်. အမဲလိုက်နှင့်ငါးဖမ်းပြည်နယ်မှပြည်နယ်မှကွဲပြားဘယ်လိုပင်တစ်ပြည်နယ်အတွင်းဥပဒေများ.
သင်သာအချို့သောဒေသများရှိငါးမျှားသို့မဟုတ်လိုက်ရှာနိုင်ပါလိမ့်မည်, အချို့ရက်နှင့်အချို့သောအချိန်များတွင်. သင်သာအချို့သောလက်နက်များအသုံးပြုတိကျတဲ့တိရိစ္ဆာန်များသတ်ပစ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်, သင်မြင်နိုင်ကြသည်ဒါကြောင့်လိမ္မော်ရောင်ဝတ်ဆင်ရန်လိုအပ်မည်အကြောင်း,.
ဒါဟာအများဆုံးအများပြည်သူပန်းခြံများအတွက်အမဲလိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ငါးမှတရားမဝင်ဖြစ်ပါသည်, သငျတို့သခို trapping များအတွက်လက်မှတ်နှင့်ဒဏ်ငွေနိုင်ပါသည်, ဝမ်းဘဲ, Geese, ငါး, မွို့၌သို့မဟုတ်ရှဥ့်. ရိုင်းခုနှစ်တွင်, ဒီတိရစ္ဆာန်များ၏အမဲလိုက်နှင့်ငါးဖမ်းပြည်နယ်ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောအတိုင်းအတာအထိစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျအထဲကရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ဘယ်မှာတိုင်းပြည်နယ်ထဲမှာလိုက်ရှာဖို့ နှင့်စည်းမျဉ်းတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ.
သင့်ဒေသခံရဲများကသို့မဟုတ်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်စီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်သဘာဝသယံဇာတအရာရှိနှင့်အတူ Check, တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးရိန်းဂျားသို့မဟုတ်ဂိမ်းမှူးကိုခေါ်. သငျသညျဖြစ်ကောင်းတဲ့အမဲလိုက်သို့မဟုတ်ငါးဖမ်းခွင့်လိုင်စင်ကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်သင်နှင့်အတူစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. လိုင်စင်မရှိဘဲတရားမဝင်အမဲလိုက်ဟုခေါ်သည် “မဲခိုး” နှင့်လေးနက်သောပြစ်ဒဏ်များအတွက်ရလဒ်တွေကို.
သငျသညျလညျးငါးဖမ်းခွင့်ပြုချက်လိုအပ်နိုင်ပါသည်. အချို့သောမြစ်များနှင့်ရေကန်များထဲမှာငါးကိုရေ၌ကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုမှအဆိပ်အတောက်ရှိပါတယ်. သငျသညျငါးခွင့်ပြုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင့်ကိုမစားရန်သတိပေးခဲ့သည်ပါလိမ့်မည် “ဖမ်း”. “ဖမ်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိ” တစ်ခုခုဖမ်းရန်ငါးမျှား၏လုပ်ရပ်ကိုဖော်ပြထားတယ်တဲ့အားကစားအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်, ထို့နောက်နောက်တဖန်အခမဲ့ setting.
တချို့ကတိရိစ္ဆာန်များရှားပါးမျိုးစိတ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဒါကြောင့်သူတို့ပညတ်တရားအားဖြင့်ကာကွယ်ထားကြသည်နှင့်မည်သည့်ရာသီအတွင်းမည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်အမဲလိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အသတ်ခံရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး. တက္ကဆက်ပြည်နယ်, ဥပမာ, protected တိရိစ္ဆာန်များ bobcats ပါဝင်သည်, ဝံပုလှေ, ဘား, တောင်ကြီးတောင်ငယ်ခြင်္သေ့, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာခွေး, ယုန်, နှင့်လိပ်.
သင့်လျော်သောစောင့်ရှောက်မှုတာနဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအောက်ပါမဟုတ်ခြင်းမရှိဘဲအမဲကလူအတော်များများဖြစ်ရပ်များရှိခဲ့သည်. အကွောငျး 1,000 ကလူမြောက်အမေရိကအတွက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအမဲလိုက်မတော်တဆမှုအတွက်ပစ်ခတ်နေကြသည်, ခန့် 100 ဤလူမြားဒဏ်ရာကနေသေဆုံး.
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်စောင့်ကြည့် US မှာနေတဲ့ဘုံအတိတ်အချိန်ဖြစ်ပါသည်. တချို့ကတိရိစ္ဆာန်များ, မြောက်အမေရိကမှထူးခြားသော, သငျသညျအသစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ. သင်တစ်ဦးကိုသုံးနိုင်သည် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့အွန်လိုင်းလမ်းညွှန် USA တွင်.
ကျေးလက်ဒေသများတွင်, သငျသညျကားမောင်းနေစဉ်တစ်ဦးရိုင်းတိရစ္ဆာန်အလမ်းဖြတ်ကူးစေခြင်းငှါ,. ဤသည်အရုဏ်နှင့်မိုဃ်းမလင်းမှီမှာနွေဦးနှင့်ကျဆုံးခြင်းအတွက်ဘုံဖြစ်ပါသည်. ကရှောင်ရှားဖို့ကြိုးစားနေသင့်ကား crashing နှင့်လေးနက်သောဒဏ်ရာဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်စေမည်. ကျွမ်းကျင်သူများကသင်သည်ဖြောင့်ခုတ်မောင်းခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်နှေးကွေးအကြံပြု, အခါအန္တရာယ်ကင်း, ယာဉ်အသွားအလာထဲကကျော်ဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့်လမ်းကနေတိရိစ္ဆာန်ကိုဖယ်ရှား, သငျသညျနိုင်လျှင်. ဤသည်ရုတ်တရက် swerving နှင့်မတော်တဆမှုရှိခြင်းအခြားယာဉ်မောင်းတားဆီးပါလိမ့်မယ်.
ဒါဟာကြီးမားတဲ့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ခေါ်ဆိုခ 911 အခြေအနေကရှင်းပြဖို့, ဒါကြောင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးသို့မဟုတ်ဂိမ်းမှူးဟာအန္တရာယ်ကိုဖယ်ရှားကာအဖြစ်အပျက်အစီရင်ခံစာရေးသားနိုငျ. မည်သူမဆိုထိုတိုက်မှုထိခိုက်ဒဏ်ရာရလျှင်, အဆိုပါဒဏ်ရာလေးနက်မဟုတ်လျှင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီဖြစ်စေချက်ချင်းသို့မဟုတ်နောက်နေ့ရရန်သေချာစေပါ. သငျသညျတယ်လီဖုန်းအကွာအဝေးထဲကရောက်နေတယ်ဆိုရင်, အဘယ်သူမျှမကူညီပေးဖို့အားဖြင့်ဖြတ်သန်း, အကူအညီရရန်ဖုန်းကိုအတူအနီးဆုံးအဆောက်အဦမှတဖြည်းဖြည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်. သင့်ရဲ့အာမခံကုမ္ပဏီကိုသင့်ကားမှမဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အကြောင်းကြားရန်.
သငျသညျမင်သို့မဟုတ်အခြားဂိမ်းတိရိစ္ဆာန်ထိမှန်နှင့်အသားလိုလျှင်, ကိုခေါ် “roadkill,” သင်ကစားပွဲအရာရှိကိုမေးစေခြင်းငှါ. အခြေအနေပေါ် မူတည်., သငျသညျသငျနှငျ့အတူယူနိုင်မည်အကြောင်း. worms နဲ့အခြားကပ်ပါးကောင်မဆိုရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်တစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိပါသည်, ဒါကြောင့်ဂရုတစိုက်အမဲသားကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်သေချာစေပါ.
ခြေလျင်ပေါ်တွင်သင်၏ရပ်ကွက်အတွင်းတွင်သို့မဟုတ်နိုင်ငံအတွင်းရှိတောင်တက်စဉ်ဖြစ်စေနေချိန်မှာသင်ကရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ကြုံတွေ့ရသင့်တယ်လိုလျှင်, ဖမ်းရန်မကြိုးပမ်းပါစေ, ယဉ်ပါးစေ, ဒါကြောင့်မာရ်နတ်သို့မဟုတ်ထိခိုက်. ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သင့်အဖော်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်မွေးမြူရေးကာကွယ်ပါ, ဒါပေါ့, ဒါပေမယ့်မရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ဒဏ်ရာရနေဖြင့်လုံးဝလိုအပ်သောဘဝထိန်းသိမ်းမဟုတ်လျှင်. သူတို့ကိုသင်မှာရော့ခ်ကြီးတွေသို့မဟုတ်ပစ်လျှင်အများစုကရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များပြေးပါလိမ့်မယ်. တချို့ကရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များပညတ်တရားအားဖြင့်ကာကွယ်ထားကြသည်, အခြို့သောသင်နှင့်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်မွေးမြူရေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်စဉ်. ဒေသခံစည်းမျဉ်း Check.
အချို့ရှိပါတယ် သငျသညျရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များကနေကျုံ့နိုင်ပါတယ်ရောဂါများ သို့မဟုတ်သူတို့အပျေါမှာနထေိုငျသောကပ်ပါးကောင်, tularemia အပါအဝင်, ခှေးရူးရောဂါ, နှင့်ဆင်ထွက်ပလိပ်. ပင်ခြင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်လူတွေအတွက်အနောက်နိုင်းလ်ဗိုင်းရပ်စ်အပါအဝင်နာမကျန်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်.